Indlu epholileyo yeentaba kwiMårdsundsbodarna enomtsalane - I-Airbnb
Indlu epholileyo yeentaba kwiMårdsundsbodarna enomtsalane
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAnton
Ikhabhathi epholileyo yeentaba kwiMårdsundsbodarna enomtsalane enemizila yemoto yekhephu kunye neendlela zokutyibiliza kwindawo. Yimizuzu engama-20 kuphela ngemoto ukuya kwindawo ethandekayo yokutyibilika e-Ski yaseBydalen ukuba ufuna ukuya kwi-slalom, ivenkile okanye utye kwindawo yokutyela. Vula iplani yomgangatho ovulekileyo kunye ne-alcove yokulala, igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela. I-alcove yokulala inebhedi ephindwe kabini ebekwe eludongeni kwaye kwigumbi lokuhlala kukho ibhedi yesofa enokwenziwa ibe yibhedi ephindwe kabini. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinamanzi abalekayo, isitovu esipheleleyo kunye nefriji. Igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nendlu yangasese evuthayo.
I-Cottage ye-27m2 eneplani yomgangatho ovulekileyo kunye neendwendwe ezi-4 ezinokwenzeka. Ibhedi ephindwe kabini kwi-alcove yokulala kunye nebhedi yesofa eya kuba yi-140cm ububanzi. I-alcove yokulala ibucala kodwa ayinamnyango.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo sisitovu, i-oveni, iketile, amanzi abalekayo anamanzi ashushu, ifriji kunye nesikhenkcisi esincinci. Indawo yokutyela enendawo yokuhlala iindwendwe ezi-4.
I-alcove yokulala enebhedi ephindwe kabini, ishelufu yeencwadi kunye newodrophu. Zive ukhululekile ukufunda iincwadi kwi-cottage kodwa uzishiye emva kokuhlala.
Igumbi lokuhlala elinebhedi yesofa, ibhokisi entle endala esetyenziswa njengetafile yekofu kunye nesitovu seenkuni. Isitofu sisetyenziselwa ukufudumeza kwindawo yokuqala, kodwa kukho nezinto zombane ezinokujikwa ukuba uyafuna. Zibekwe kwii-degrees ezili-10 ngokungagqibekanga ukuze zive ukubanda xa ufika. Isitofu sitshisa ngokukhawuleza i-cottage kwiqondo lokushisa elifunayo. Iinkuni, iimatshisi kunye neematshisi ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe.
Igumbi lokuhlambela elineetyhubhile zeshawa, indlu yangasese evuthayo, isinki kunye nesihlangu / isomisi sebhuthi. Kukwakho nendlu yangasese entle yangaphandle kwisiza ukuba ungathanda ukuyisebenzisa.
Kukho indawo kwisakhiwo sokupaka imoto, kodwa ebusika kunokuba ngcono ukupaka kwindawo yokupaka ngaphandle kwesakhiwo ukuba awunayo imoto eqhuba ngamavili amane. Kukho nendawo yokupaka itreyila yesithuthuthu kwindawo yokupaka ecaleni kwesakhiwo. Intambo yokwandisa iyafumaneka ukuba ufuna ukuqhagamshela isifudumezi se-injini.
Kukho ivaranda encinci enefenitshala yangaphandle apho ungahlala khona ukuba imozulu iyakuvumela. Kukwakho nebhola ekhatywayo enokuthi isetyenziswe ziindwendwe.
I-Mårdsundsbodarna yilali entle kakhulu esentabeni enezindlu ezimalunga nama-200. Kuthe cwaka kwaye kumnandi kuba akukho venkile okanye indawo yokutyela. Kukho abaninzi kulo mmandla abathanda ukuhamba kwiintaba kwaye bakhwele ii-scooters kunye nazo zonke iindlela ezintle ze-snowmobile kule ndawo. Kukho neendlela ezimbini ezahlukeneyo ze-ski ezihlala zilungiswa ukuba unikezelo lwekhephu lwanele.
Ehlotyeni kukho iindlela ezintle zokuhamba e-Bydalsfjällen.
Kumalunga nemizuzu engama-20 ukuya eBydalen ngemoto apho unokuya khona i-slalom njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Anton
I'm a social worker from Sweden that loves to travel and be in nature in all kinds of ways!
Ndifumaneka ngemibuzo nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala. Ndihlala malunga neyure ukusuka kwi-cottage ngoko ke kunokwenzeka ukuba ndifumane uncedo ukuba luyimfuneko kwaye ndiyenyuka kwaye ndicoce i-cottage phakathi kweendwendwe nganye. Ukungena kunye nokuphuma kunokwenzeka ngaphandle kokuba ndikhona.
Ndifumaneka ngemibuzo nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala. Ndihlala malunga neyure ukusuka kwi-cottage ngoko ke kunokwenzeka ukuba ndifumane uncedo ukuba luyimfuneko kwaye ndiy…